Mety mbola ho loza mitatao ho an’ny tontolo iainana ve ilay sambo venezoeliàna mpitondra solika ao amin’ny Ranomasimbe Pasifika? · Global Voices teny Malagasy
Nitory eny amin'ny fitsaràna ireo Mpanjono sy Naman'ny Ranomasina
Voadika ny 16 Marsa 2021 7:24 GMT
Gary Aboud, sekreteran'ireo vondron'orinasa Fishermen and Friends of the Sea (FFOS)- Mpanjono sy Sakaizan'ny Ranomasina, mitsidika ilay FSO Nabarima, 16 Oktôbra 2020. Pikantsary nosintonina tao amin'ny lahatsarin'ny FFOS, nalefan'i guns21111 tao amin'ny YouTube.
Ity lahatsoratra ity dia navoaka voalohany tao amin'ny Cari-Bois News. Dika nasiam-panovàna no naverina navoaka etoana rehefa nahazoana alàlana.
Tamin'ny Oktôbra 2020, nisarika ny sain'ny daholobe ilay fikambanana tsy mikatsaka tombony ara-bola ao Trinidad&Tobago “Fishermen and Friends of the Sea (FFOS)” mba hijery ny zavamisy hoe toa mitongilana ao amin'ny ilany iray lavitra ny morontsiraky ny firenena, ao amin'ny Hoalan'i Paria any amin'ny Ranomasina Karaiba ny sambo iray mpitondra solika misy ny saina Venezoaliàna mihofahofa eo aminy. Solika tombanana ho hatramin'ny 1,3 tapitrisa barika tsy mbola voadio no ao anatiny, ary mety ho loza goavana mitatao ho an'ny firindràm-piainana sy ny fiveloman'ny manodidina.
Hatramin'ny 20 Oktôbra, nandefa solontena nisy olona telo avy amin'ny ministeran'ny angovo sy ny indostrian'ny angovo (MEEI) ny governemantan'i Trinidad & Tobago mba hanombana ny satan'ny FSO Nabarima, ka io no nanao tsoakevitra hoe kely dia kely ny mety hirarahan'ireo solika, saingy tokony hohafainganina ny famindràna ireo solika tsy voadio avy ao aminy. Nandritra ny antsafa iray natao ho an'ny mpanao gazety taorian'ny namoahan-dry zareo ny tatitra nataony, torohevitr'ireo manampahaizana manokana ihany koa ny hanaovana tombana aorian'ny hetsika ho atao, nilaza ny minisitra Franklin Khan fa mety “hojereny izay haha-marintoerana ny zavatra rehetra ka hisy araka izany ny fitohizan'ny fanarahamaso”.
Volana dimy teo ho eo taty aoriana, tsy mbola niverina nitsirika ilay sambo mpitondra solika akory ireo manampahefana ao Trinidad & Tobago, na teo aza ny fepetra izay izy ireo ihany no nanambara fa hisy ny fanarahamaso tsy maintsy atao ny volana nanaraka ny fitsidihana natao tamin'ny 20 Oktôbra, ka izany no nanosika ny FFOS hitondra ny raharaha teny anatrehan'ny fitsaràna. Ny 10 Martsa, namoaka fanambaràna an-gazety ilay vondrona mpandefa fanairana momba ny resaka tontolo iainana, nitakiany ny hoe:
Ho an'ny FFOS, anefa, ny valinkafatra “mihisatra sy tsy mirindra” avy amin'ireo governemanta roa tonta amin'io olana io dia “mariky ny tsy fahatomombanan” ilay Drafitra Iraisana Fiatrehana Hamehana raha sanatria misy solika raraka an-dranomasina (1989), fifanarahana iray izay manipika ireo masontsivana rehetra momba ny fiatrehana miaraka ny fiparitahan'ny solika ao amin'ny Hoalan'i Paria, ary milaza ireo tondroina ho fepetra azon'ny andaniny na ny ankilany irotsahana an-tsehatra mihoatra ny sisintaniny, arakaraky halehiben'ny loza mitatao.
Tamin'ny alàlan'ilay fampiharana Freedom of Information (FOI), nitaky dika iray avy amin'io drafitra io ny FFOS mba hahafahany mamaritra raha tena nikaroka marina tokoa izay làlana rehetra azo raisina ny governemanta ao Trinida&Tobago mba hiarovana ny tombontsoan'ny vahoakany. Kanefa, araka ilay fanambaràna an-gazety, nolavin‘ny ministeran'ny raharaha ivelany sy ny CARICOM ilay FOI avy aminy ho fisorohana ny tsy hahatohina ny fifandraisan'i Trinidad&Tobago amin'i Venezoelà. Vokany, ho eny amin'ny fitsaràna ny FFOS hanandrana ny haka fahazoana dika iray amin'ilay “Drafitra Iraisana Fiatrehana Hamehana raha sanatria misy solika raraka an-dranomasina”:
Ilay fanambaràn'ny FFOS dia miampanga ihany koa ny governemanta ho nanabarabara ny vahoaka momba ny tena zavamisy manodidina ilay dingana fanesorana ny solika, tamin'ny fitanisàna tatitra iray avy amin'ny Bloomberg milaza fa efa tamin'ny Janoary 2021 no nanomboka ny dingana fanesorana ny solika, mifanohitra amin'ilay Oktôbra 2020 nolazain'ny minisitera.
Any amin'ny lafy venezoeliàna ao amin'ny hoalan'i Paria ny FSO Nabarima no miasa nandritra ny ampolon-taona, manatoby ireo solika avy ao amin'ny toeram-pitrandrahan'ny Corocoro amin'ny alàlan'ny fiaraha-mitrandraka ataon'ny orinasam-panjakana venezoeliàna Petróleos de Venezuela (PVDSA) amin'ny Eni, orinasa italiana maro rantsana erantany.
Tantaran'ny Trinite sy Tobago farany
Goiana 7 andro izay